Labsa Kora Bu’ureessaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) -
bilisummaa May 22, 2013	1 Comment
Ejjennaan nuti Itophiyaa akka fedireshena sab-daneessaa demokraatawaatti caasesuudhaan bulchiifamoota ambatti jijjiiruudhaaf fudhanne kun ejjennaa (warra) mootummaa har’a saba keenya cunqursaa jiruu ni faalleessa. Akkasumas, ejjennaa (namootaa fi murnoota) warra duraan saba keenya cunqursa turee ammas deebi’ee cunqursuudhaaf dharra’uu ni faallessa. Dabalees, ejjennaa humnoota mirga hiree murteeffannaatiif hiika biyya walaba dhugoomuu qofatti dhiphisan irraahis ni maqa.
Imaammatni mootummaan Wayyaanee akka party-tokkicha dorgomaa hin qabnetti of dhiheessuudhaan bara baraan aangoo irra turuudhaaf hordoftu waaraa akka hin taane amanna. ”Iggitiin tokkummaa warraaqaa demokraatawaan ana malee hin jiru” jechuudhaan dabni iseen demokraasii fi federalummaa irratti hojjatu bakka hin gahu. Federalummaa-demokraasii-maleessa hojii irra oolcuudhaaf carraaqqiin Yugoslavia duraanii keessatti kajeelamee dhiiga hedduu dhangalaasuudhaan akka hoonga gahe oggaa yaaddannu imaammatni Wayyaanees haala fakkaataatti geessuudhaaf akka malu sodaanna.
Humnootni hanga ammaa Itoophiyaa bulchuu irratti bakka wal jijjiiran, waan hedduu irratti wal ha falman malee, haal-duree dhalli saboota biraa guutuudhaan politikaa Itophiyaa keessaa qooda fudhachuudhaaf malan murteessuudhaaf akka waan mirga guutuu qabaniitti of fudhatu.
Haal-dureen mootummoonni warri duraan biyyattii bulchaa ture lafa kaa’uu mirga aadaa fi afaan saboota Amaara hin ta’inii haaluu dha. Ejjennaan isaanii kunis, mirgoota namoota kabajuudhaaf mirgoota saboota haaluun dirqii akka ta’uu akeeka. Warri Mootummaan amma biyyatti bulchaa jiru ammoo mirgoota saboota kan kabaju of fakkessaa mirgoota namoota fallessa. Ejjennaa jara kana lamaanii jabeessinee falmina.
1. Itophiyaan akka Federeshanitti Caaseffamuu Irratti
Ejjennaan irraa kaanu, tarkaanfiin bara 1991 booda Itophiyaa akka federeshana sabootaatti caasessuudhaaf fudhatame qajeelaa ta’uu dha. Fudhatamuun tarkaanfiin kanaa hammeenya ykn arjummaa . Mootummaan Wayyaanee keessaa hin maddine, jabaachaa adeemuu qabsoo Oromoon sabootni cunqurfamoon biraa mirga hiree murteeffannaa isaaniitiif gochaa turantu dirqii taasise malee.
ABOn Itophiyaa akka federeshan sab-daneessaatti caasessuudhaan daba empayerummaa keessaa maddan buqqisuun akka maluu irratti yaada dhiheessu irratti qooda murteessaa taphate. Garuu federeshana akkasii dhugoomsuun faallaa fedhii murna bicuu amma biyyattii bulchaa jiruu ta’e. Amma daba federeshana dhugaa hanqisan hundaa buqqisuudhaaf qabsoofna.
2. Qabsoo Hiree Murteeffannaa Irratti
3. Hojii Irra Ooluu Hiree Murteeffannaa Irratti
Nuti caasaa federeshanaa amma jiru irratti ijaaruu akeekkanna.
Ta’uus, hir’inoota tartiibaa fi kaayyoo of-bulchuu fi waliin-buluu gufachiisan qajeelchuudhaan demokraasii fi federeshanni wal-faana akka dhugooman taasisuudhaaf qabsoofna.
Namootaa fi mootummootni nu malee kan tokkummaa Itophiyaa hubatuu fi tiksuudhaaf qophii ta’e hin jiru jedhan ni jiru. Nuti ejjennaa kana ni mormina. Hanga ammaa hawaasaan amboota aangomanii waan hin dhalatiniif tokkumman ammallee hin uumamne. Akkuma jaarraa tokko caalaadhaaf moyxaffatnee beeknutti, aadaa, seenaa fi afaan tokkicha qabna jedhanii lallabuun iggitii tokkummaa hin taane.
Imaammatni Wayyaanee kan ”nu malee tokkummaa warraaqaa fi demokraatawaadhaaf iggitiin hin jiru” jedhus ni haalla. Imaammatni akkasii bakka biraatti balaa guddaadhaan hoonga akka gahe waan beeknuuf. Akksumas misoomni osoo ummata hin hirmaachiifne kajeelamaa jirus madda tokkummaa kan biraa ta’uu hin danda’u.
Waan ta’eef, nuti tokkummaa abbaa-biyyummaa (constitutional patriotism) n heeraatiin utubamuu maddisiisuun irra filatamaa dha jenna. Abbaa-biyyummaan heeraa ummatootni dhaabota demokraasii isaaniitiif amanamaa ta’uudhaaf fi isas farreen keessaa fi alaa irraa tiksuudhaaf murteeffachuu isaanii keessaa madda.
• Mirgoota Civilummaa: Isaanis, birmadummaa fi iggitamuu eenyummaa namootaa, mirga birmadummaadhaan yaada ofii ibsachuu, birmadummaadhaan amantii fedhan hordofuu, seera duratti hundi walqixa ta’uu, fi sababa saalaa, sanyii, sabummaa fi lammummaatiif balfamuun dhorkaa ta’uu
• Mirgoota politikaa: Isaanis, mirga filuu fi filamuu fi akkasumas mirga walgahuu, ijaaramuu fi odeessa argachuu
• Mirgoota hawaasummaa: Isaanis, mirga walqixa carraa qabaachuu, mirga tajaajila fayyaa argachuu, mirga barnoota agachuu
• Mirgoota aadaa fi afaanii: Isaanii, mirga aadaa ofiitti boonuu, mirga seenaa ofii beekuu fi ittiin boonuu, mirga afaan ofiitiin barachuu fi ittiin tajaajila bulchiinsaa fi murtii seeraa argachuu
• Qaamni tajaajilla bulchiinsa uummataa harka paartii aanga’aa jalaa bahee, walaba ta’ee, haaromsamee ijaaramuu qaba.
• Humni waraanaa loogii tokko malee tajaajila keenuufi akka isa dandeessisutti, sirnaa fi seera ammayyaarrattii hundaawee jaaramuu qaba.
• Dhaabboleen eegumsaa hujii fi hirmaannaa siyaasaa lammiilee biyyaa to’achuu fi hordofuu irraa if qusachuu qabu. Lammiileen biyyaa sodaa fi bir’ata tokko malee dhaaba siyaasaa fedhan deggeeruu ykn hordoofuu danda’uun barbaachisaadha.
• Dhaaboleen sab-quunnamittii uummataa qaamaa walaba ta’ee jalatti ijaaramanii loogii tokko malee hojii beeyssisaa, barmootaa fi bashanannaa hunda walabummaan gaggeeyssuu.
8 Waahilootaa fi fakkaattota keenyaa hiriirsuu ilaalchisee
Ilaalcha, imaammataa fi akeeka armaa oliitti tarreeffaman kana warra yaadaa fi akeeka walfakkaataa qaban biraan gahuu fi hubachiisuun, itti aansees tumsa waliin ijaarrachuun rakkoo siyaasaa fi laamsha’umma yeroo ammaatti biyyaattii takaalee jiru irraa furgaasee Itoophiyaa gara fuulduraatti akka tarkaanffachiisuu hin shakkinu. Kanas bakkaan gahuuf humnaa fi dandeettii qabnu hunda qusannoo tokko malee wareeguu fi gumaachuun, akkasumas dhaabboolee fi qaamolee ilaalcha keenya kana fakkaatu qaban hunda hiriirsuu fi tumsuun biyyaattii haala amma jirtu irraa gara dimookraasii haqaatti tarkaanffachiisu irratti jabinaan hojjeenna.
Dhummarratti, humnoolee yaadaa fi ilaalcha nuti qabnu qaban hundi fi kan dimookraasii haqaa lammii isaanii gonffachiisuuf hawwan hundi dirmannaa akka nuuf godhan yaamiicha dabarsinaaf.
Cunqursaan jaarraa heedduu lakkaawatetti xumura itti godhuun irree tokkummaa gaafata. Garaagarummaa xixxiqqoo marii fi haasawaan furachuu danda’amu irratti humna keenna fixuu irraa of qusannee qabeenyaa fi yaada keenna tokkoomsinee akka injifannoon baanu ADOn waamicha isiniif godha.
Dantaa ummata Oromoo dursuudhaan addaa addummaa xixiqqoo mariin furannee humna, qabeenyaa fi yaada keenna tokkoomsinee akka injifannoo waaraan fullaanu waliin hojjachuuf qophii tawuu keenna irra deebinee ibsina.
Bitootess 27, Bara 2013
Tags ADO Bayaan Diimaa hassan husseen Leencoo leencoo baatii ODF
Previous Suur & Sagalee Jiruuf jireenya Oromoo Kumaatamaan
Next Taphataa Kubbaa Miilaa Beekamaa Devid Beekamii fi Leenjisaa Aleksi Fergusen Tapha Dhiisuuf Labsan
shanee, qaacaa, jijji5ramaa, kore yeroo and now ado